Bankiga adduunka oo warbixin ku sheegay in dhaqaalaha Somalia uu kobcay… – Hagaag.com
Bankiga adduunka oo warbixin ku sheegay in dhaqaalaha Somalia uu kobcay…
Bankiga adduunka ayaa sheegay arrintaasi ay muujineyso sida ay abaartu u keentay dib u dhac dhinaca dhaqaalaha ah, waxaana dhaqaalaha Soomaaliya uu taariikh ahaan ku tiirsana dhoofka xoolaha.
Wakiilka bankiga adduunka ee Soomaaliya ayaa yiri “Waa warbixin aan dooneyno inay soo baxdo Lixdii bilood ee kasta, warbixin kasta waxa ay leedahay mowduuc hoos loogu eego, warbixintan waxay si gaar ah u eegeysaa lacagaha la isku weydaarsado telefoonada, fariinta dhaqalaha ee warbixintan ay dirreyso ayaa waxa ay tahay abaartii sanadkii hore dhacday in ay hoos u dhac ku keentay dhaqaalaha”.
Warbixinta bankiga adduunka ayaa waxa ay si weyn u ammaantay kobaca iyo doorka dhaqaalaha ee hananka lacagaha la isugu weydaarsado telefoonada hadii ay ahaan laheyd xawilaadaha iyo wax kala iibsigaba.
Waxaa bankiga adduunka uu sheegay in bishii 155 Million is weydaarsi lacageed ama wax kala iibsasho la isugu gudbiyo telefoonada, taasi oo ku fadhida aduun dhan 2.7 Bilyan oo dollar bishii, wuxuu kaloo bankigu tilmaamay in lacagaha telefoonada ay ka xoog bateen lacagaha waraaqda ah ama cadaanka ah ee ka jira Soomaaliya.
Warbixinta oo laga sii daayay Idaacada VOA ayuu sidoo kale Bankiga adduunka wuxuu sheegay wax-yaabaha nugeylka u keenaya in ay ka mid yihiin cilad ka imaaneysa in qofka wax iibsanaya aanu jirin hab difaacaya hadii uu muran dhaco ama in kan wax diraya uusan aqoon dadka uu wax u dirayo iyo in bankiga Soomaaliya uusan wax la socod ah ku laheyn hanaankan, waxaana bankiga uu soo jeediyay intaasi ay u baahan tahay sharci dejin.